mukuru « Send Money To Zimbabwe
Posts Tagged ‘mukuru’
Posted: 15th April 2010 by admin in Remittance Research
Tags: mukuru, South Africa
After discussing Zimbabweans living in South Africa the other day, I read a hopeful article about an organization in Cape Town helping Zimbabwean refugees. The Adonis Musati Project (AMP) was named after a young Zimbabwean boy who died of starvation on the streets of Cape Town in 2007, while awaiting his asylum papers. The article goes […]
Sending money home from South Africa to Zimbabwe.
Compare your options when sending money to Zimbabwe. Look for companies that offer SMS voucher for cash collection, and have online and call centre options, such as Mukuru.
Posted: 7th April 2010 by admin in Remittance methods
Tags: groceries, mukuru, Zimbabwe
Send groceries to Zimbabwe with Mukuru.com